Filoha Hery Rajaonarimampianina : Nampita ny fanilon'ny fitiavan-tanindrazana -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : Nampita ny fanilon’ny fitiavan-tanindrazana
Tao anatin’ny filaminana sy ny fahamendrehana no nanamarihan’ny malagasy ny fahatsiarovana ny tolom-panafahan’ny 29 Marsa 1947. Nandritra ireo hetsika rehetra nentina nanamarihana izany no niantsoan’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fitiavan-tanindrazana eo amin’ny malagasy rehetra ary niantso ny fiaraha-miasa amin’ny rehetra amin’ny fampandrosoana ny firenena izy. Nosantarina tamin’ny fanaterana fehezam-boninkazo tetsy amin’ny tsangambaton’ny Mahery fo tetsy Ambohijatovo, ary narahan’ny fitokanana ny takelam-pahatsiarovana ny faha-70 taonan’ny tolom-panafahana, ny fanamarihana izany omaly.
« 70 taonan’ny tolom-panafahana: Mba hiampita ny fanilo, ny lasa tsy fanadino » no lohahevitry ny fanamarihana izay nasongadin’ny fampitana ny fanilo avy amin’ireo mpitolona mahery fo ho an’ny tanora ankehitriny rehefa niampita tamin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Nandritra ny fanaterana fehezam-boninkazo teny amin’ny fasan’ny mahery fo, teto Antananarivo sy tany Ampanihifana Moramanga no nanatanterahana izany. «Aoka tsy ny fifanenjehana sy ny fifamonoana no fanilo miampita any amintsika», araka ny kabarin’ny filoha raha niantso ny rehetra hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana ny firenena izy. « Mila mitodika amin’ny firenena sy ny tanindrazana isika. Mitsilopilopy io fanilo any amin’ny toerana sasany, eny an-tananan’ny olom-pirenena sasany, andraikitsika isan’andro ny handrehitra sy hampita io fanilo io », hoy hatrany izy. Nomarihiny ihany koa fa « tokony hiredareda ao anatintsika ny fanilon’ny firaisan-kina, ny fihavanana, fiaraha-mientana, firaisam-po. Mila atambatra ny hery ».
Nanotrona ny filoham-pirenena tetsy Ambohijatovo omaly ary nitondra sy nametraka fehezam-boninkazo ihany koa ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana, ny filohan’ny antenimieram-pirenena Honoré Rakotomanana, ny filohan’ny antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy, ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana ary ny avy amin’ny Fifanampiana malagasy sy ny vondron’ny tia tanindrazana malagasy (VTMM).
Tsy nangataka voa-tehamaina. Nandritra ny fanamarihana ny tolom-panafahan’ny taona 1947 tany Moramanga, namaly avy hatrany ny fangatahana nataon’ny filohan’ireo bekotro maro holatra ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ka nanambara fa hasondrotra ho 300 000 Ar isaka ny telo volana ny vola raisin’ireo tia tanindrazana ireo raha 100 000 Ar izany teo aloha. Ankoatra izay hiditra an-tsehatra amin’ny fanampiana ireo bekotro maro holatra ihany koa ny fitondram-panjakana ka ao anatin’izany ny fanarenana ny toeram-ponenan’izy ireo ravan’ny rivodoza Enawo. Toa izany koa ny famatsiana ara-pitaovana sy kojakoja samihafa hiatrehina ny ririnina.
Miis 1452 ankehitriny ireo bekotro maro holatra manerana ny Nosy izay ka ny 179 amin’izy ireo dia ao Moramanga, toerana anisan’ny nivaivay tamin’ny famonoana ireo mpitolona tao anatin’ny « wagon Moramanga ». Ity farany izay mbola voatahiry ao anatin’ny tranom-bakokin’ ny zandarimariam-pirenena ao Moramanga. Ralaimboa, 106 taona kosa ny zokiny indrindra monina eto Antananarivo.